माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय, ओली प्रधानमन्त्री, दाहालको टुंगो छैन | नेपाल आज
माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय, ओली प्रधानमन्त्री, दाहालको टुंगो छैन
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ‘वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ बनाएर साझा उम्मेदवारीका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचानमा होमिए । निर्वाचनपछि यो गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत हुने घोषणा उसै दिन भएको छ, जुन दिन गठबन्धन घोषणा भयो ।
गठबन्धनका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेझैँ वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइको हाराहारी वा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो भने ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पदको बाँडफाँड कसरी होला ? यतिबेला धेरैका मनमा यही जिज्ञासा देखिन्छ ।
दाहालले पार्टी एकीकरणपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरा बताएका छन् । सोझै नभने पनि दाहालका अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् र दाहाल पार्टी अध्यक्ष हुनेछन् । एमालेका केही नेताहरूका अनुसार पद बाँडफाँडमा औपचारिक सहमति नभए पनि दाहालले भनेको जस्तै हुने अनौपचारिक सहमति भएको छ । ओलीले चाहिँ पद बाँडफाँडका विषयम कुनै सहमति नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
ओलीले सहमति भएको छैन भने पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरा लुकाएका छैनन् । यस विषयमा उनको सबैभन्दा पछिल्लो अभिव्यक्ति सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा सार्वजनिक भएको छ । चुनावमा भनेको जस्तो परिणाम आए को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीले प्रधानमन्त्री ठूलो कुरा होइन भने पनि मुलुकको नेतृत्व एमालेले गर्छ भनेर आफू नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा सबैले बुझ्ने गरी संकेत गरेका छन् ।
‘तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुने भनेर मतदाताबीच प्रचार भइरहेको छ नि’ भन्ने प्रश्नमा ओलीले दुई पार्टीबीचको हिस्सामा ६० प्रतिशित एमालेको हुनुले एमालेले मुलुकको नै नेतृत्व गर्छ भन्ने देखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, माओवादी त्यसमा सामेल हुन्छ र एकीकरणमा जान्छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।
ओलीको भनाइमा यस विषयमा प्राविधिक निर्णयचाहिँ भएको छैन । अर्थात ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर पार्टी कमिटीको निर्णय भएको छैन तर निर्णय हुने त्यही हो । ओलीको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रष्ट छ– वाम गठबन्धनको बहुमत आएमा ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् तर दाहालले पार्टीको कुन पद पाउनेछन् भन्ने टुंगो छैन ।
वाम गठबन्धन घोषणापछि धरैका मनमा उब्जेको अर्को जिज्ञासा हो– एमाले पार्टी माओवादीको लाइनमा जान्छ कि माओवादी पार्टी एमालेको लाइनमा ? यस विषयमा पनि ओलीको प्रष्ट अभिव्यक्ति आएको छ । ओलीका अनुसार दाहालको माओवादी पार्टी हिजोका सबै अस्पष्टता छाडेर एमालेको परिपक्व नीतिमा सहमत भएको हो । माओवादीतिरको अन्योल र अस्पष्टता एमालेमा मिसाउन लागेको होइन । एमालेको नीति व्यवहारमा जान्छ किनभने एमाले नीतिमा प्रष्ट छ ।
ओलीको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुने होइन, माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय हुने हो । उनको भनाइको सोझो अर्थ यही हो । गठबन्धनको बहुमत आए ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् । साठी–चालीसको सिद्धान्त अनुसार पार्टी अध्यक्षमा पनि ओलीकै पासा पल्टिन सक्नेछ ।
यो पटकको ‘अफ्रिकी खेलाडी अवार्ड’ पनि सलाहलाई
३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मानवअधिकार महाभेला सम्पन्न
१४ लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध